Cristiano Ronaldo Oo Guul Ku Hogaamiyay Juventus, Cagliari Ayay Garaaceen | Somalia News
Cristiano Ronaldo Oo Guul Ku Hogaamiyay Juventus, Cagliari Ayay Garaaceen
Kooxda Juventus ayaa guul ay u qalmeen ka gaadhay kooxda Cagliari kulan ka tirsanaa horyaalka Serie A-da kana dhacay garoonka Allianz Stadium.
Kooxda Cagliari ayaa si dar-dar leh ku bilaabatay ciyaarta iyaga oo Juventus ku qaadayay weeraro rogaal celis ah xilli ayna Juventus wali galin jawiga ciyaarta.
Kooxda Juventus ayaa dhanka kale doonaysay in ay ciyaarta ciyaar dagan iyaga oo maamulayay dhanka kubad haysashada waliba raadinayay goolal ay ciyaarta wax kaga badalaan.
Daqiiqadii 38-aad ayay Juventus dhalisay goolka 1-aad iyaga oo uu u dhaliyay xiddigooda Cristiano Ronaldo kaas oo hogaanka u dhiibay kooxdiisa.
Kooxda Juventus ayaa sii waday raadinta goolasha iyo maamulista ciyaarta Cagliari-Na u diidayay in ay qaadaan weeraro rogaal celis ah.
Daqiiqadii 42-aad ayay Juventus dhalisay goolka 2-aad ee ciyaarta iyaga oo uu mar kale Isla xiddigooda Cristiano Ronaldo kaas oo ciyaarta ka dhigay 2/0.
Waxa sidaas ku dhamaatay qaybtii hore ee ciyaarta iyaga oo ay Juventus heshay wixii ugu muhiimsanaa oo ahaa goolal ay ciyaarta wax kaga badasho.
Kooxda Cagliari ayaa qaybtii dambe iska caabin kara hor timid kooxda Juventus iyaga oo xitaa ku qaaday weeraro halis galiyay kooxda Juventus.
Laakiin waxa ka maqnayd dhamaystirka fursadaha iyaga oo kubaduhu ku dhimanayay daafaca kooxda Juventus halka kubada dhaaftana Goolhayaha Juventus qabanayay.
Qaybtii dambe ayaa ahayd mid ayna natiijada waxba iska badalin inkasta oo ay labada kooxoodba isku dayeen in ay goolal dhaliyaan.
Waxa sidaas ku dhamaatay ciyaarta oo ay Juventus gaadhay guul uu ku hogaamiyay Cristiano Ronaldo kaas oo sii wada dhigista wacdaraha.
Previous articleThe Frenchman was sentenced to 25 years for killing his wife and burning her body
Next articleMan United oo garoonkeeda Old Trafford saddexda dhibcood kaga qaadatay kooxda West Bromwich Albion… +SAWIRRO